Umkhiqizi we-China Quality Blister Packaging, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Blister Ukupakisha
Ukupakisha kwe-Blister ngokwezifiso
Ama-connexions awanalo ulwazi olunzulu lokwenza i-Clamshell Packaging for Cables kepha futhi anezimo eziningi zokupakishwa kweblister yangokwezifiso. Ama-connexions anikezela ngezixazululo zokupakisha ezenziwe ngevolumu ephezulu ezenzelwe ukukhulisa ukubonakala nokuvikelwa komkhiqizo wakho. Umkhiqizo wethu obanzi ufaka amakhadi amabhamuza namaphakethe we-thermoformed blisters, ama-clamshells, izibonisi, njalonjalo.
Ukupakisha kwe-Clamshell yamakhebuli
Iphakethe le-clamshell yiphakethe lepulasitiki elenziwe nge-thermoformed elinamacala amabili axhunywe ngehenjisi noma ngophawu. Ama-clamshell amaningi afaka ikhadi lokufaka iphepha eliqhakambisa izici nezinzuzo zomkhiqizo wakho. Ama-clamshell amaningi avalwa ngokufakwa uphawu kwe-RF, kepha futhi angavalwa ngethebhu ephaketheni. ishalofu.
I-Blister Packaging yezintambo
Sihlinzeka ngezifiso ezilahliwe zeplastiki ze-clamshell onqenqemeni lokugoqa ikhadi le-blister ngekhwalithi ephezulu. Sizinikele ekuqhumeni iphakethe iminyaka eminingi, sihlanganisa iYurophu kanye nemakethe yaseMelika. Silindele ukuba ngumlingani wakho wesikhathi eside eChina.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Blister Ukupakisha abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Blister Ukupakisha esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.